Booliska oo soo qabtay askar loo hayto dhallinyaradii xalay iyo caawa lagu dilay Muqdisho - Caasimada Online
Home Warar Booliska oo soo qabtay askar loo hayto dhallinyaradii xalay iyo caawa lagu...
Booliska oo soo qabtay askar loo hayto dhallinyaradii xalay iyo caawa lagu dilay Muqdisho
Muqdisho (Caasimada Online) –Taliska booliska Soomaaliya ayaa war ka soo saaray dilalkii xalay iyo caawa ay askar ka tirsan dowladda ka geysteen gudaha magaalada Muqdisho, kuwaas oo ay ku dhinteen Sarkaal ka tirsanaa ciidanka Asluubta oo caawa la dilay iyo wiil iyo gabar walaalo ahaa oo xalay la dilay.
Afhayeenka booliska Soomaaliya Cabdifitaax Aadan Xasan oo caawa shir jaraa’id qabtay ayaa sheegay in dhamaan ragii dilalka geystay ay ku jiraan gacanta hey’adaha ammaanka.
“Ciidanka Booliiska Soomaaliyeed waxuu bulshada Soomaaliyeed la wadaagayaa in baaritaan kadib ay maanta ku guulaysteen in ay gacanta ku soo dhigaan eedaysenayaashii xalay rasaasta ku dilay labada marxuum ee kala ah Sakariye Maxamuud Xuseen iyo Sowda Maxamuud Xuseen, waxaana berri waxii ka dambeeya cadaaladda hor geyn doonaa eedeysanayaasha,” ayuu yiri Afhayeenka booliska Cabdifitaax.
Sidoo kale afhayeenka ayaa cadeeyey in dhamaan eedaysaneyaashii labadaas kiis gacanta lagu haayo, sidoo kale qoraal ka soo baxay booliska ayaa lagu sheegay in Cabdiwaayeel Macallin Aadan iyo Dayax Nuur Cabdi Aadan oo ah ragga loo heysto dilalkaas ay ku jira gacanta hey’adaha ammaanka.
Mahad Cabdiraxmaan oo ahaa sarkaal ka tirsanaa ciidanka Asluubta Soomaaliya ayaa caawa u geeriyooday rasaas ay ku fureen ciidamo ka tirsan dowladda, xiili uu la socday mooto Bajaaj agagaarka isgoyska KM 4, waana habeenkii labaad oo si xariir ah uu fal-noocaan ah uga dhacay magaalada Muqdisho.
Ciidamo ka tirsan dowladda oo wata gaari military ayaa xalay sidaan oo kale Sakariye Maxamuud Xuseen iyo Sowda Maxamuud Xuseen oo walaalo ahaa ugu toogtay isgoyska Dabka ee magaalada Muqdisho, kadibna waxaa goobta isaga baxsaday gaarigii ay wateen askarta dishay wiilka iyo gabadha.
Dhacdadaas oo noqotay mid xanuun badan oo ay wada dareemeen dadka reer Muqdisho, ayaa wararkii u dambeeyey ee aan ka heleyno waxay sheegayaan in weli aan la aasin meydadkii labada qof ee walaalaha ahaa.
Meydadka Wiilkii iyo Gabadhii xalay lagu dilay isgoyska Dabka ayaa weli ku jira qaboojiyaha, waxaana la sheegay in ehellada dhalinyaradaas ay wacad ku mareen in aan la aasi doonin ilaa inta dowladda Soomaaliya ay cadaaladda ka hor keeneyso askartii dishay.